ICyclalg ifumana i-12 kg yokuqala ye-microalgae biomass | Ukuhlaziywa okuluhlaza
I-cyclalg ifumana i-12 kg yokuqala ye-biomass evela kwi-microalgae
UDaniel Palomino | | Biodiesel, IBiomass, Izaziso
Amagcisa eSebe leBiomass le ICener (IZiko laMandla aVuselelekayo leSizwe), ngexesha lesemester yokuqala ye-2017 babenakho ukwenza iprojekthi ("Icyclalg") ye Inkcubeko encinci kumaziko eziko lesibini le-Biofuels Centre okanye eyaziwa ngokuba yi CB2G, Zonke ezivela kwiinkqubo zokulima eziphuhlisiweyo INeiker-Tecnalia, IZiko laseBasque loPhando lwezoLimo noPhuhliso.
Kule projekthi Kufunyenwe i-12kg yokuqala ye-biomass ye-microalgae entsha neziphumo ezingaphezulu kwezilindelweyo malunga nokuxinana kwezinto eziqinileyo kunye nomxholo we-lipid, enexabiso elingaphezulu kwe-50% yale yokugqibela.
Ngalo lonke eli xesha lophando, uvavanyo lweoyile ekhutshiweyo ye-microalgae elinyiweyo, eqhutywa liqabane leprojekthi, iQatar-CRITT, kwimveliso ye-biodiesel.
Ukongeza, inkampani enikezelwe kwicandelo le-biofuels ilawula ngoku vavanya okanye uvavanye umgangatho wale biodiesel ifunyenwe, kunye ne vavanya Umtsalane onokubakho kule mveliso kwicandelo loshishino.
Le projekthi ICyclalg ixhaswa ngemali INkqubo yokuSebenza yokuBambisana eSpain-France-Andorra, IINKCUKACHA, ngo-2014-2020.
1 Iinjongo zeprojekthi
2 Izisombululo ezintsha
El Eyona njongo iphambili ICyclalg yile phuhlisa kwaye uqinisekise iinkqubo ezahlukeneyo zeteknoloji ejolise ngokupheleleyo ekuphumezeni ukufunyanwa kwe-biodiesel ngendlela yokulima i-microalgae njengoko sele uqinisekisile.
Ngokunjalo, ukongeza kwi-Cener kunye ne-Neiker-Tencalia (obengumnxibelelanisi weprojekthi), iTecnalia Foundation, AIN (Navarra Industry Association), Catar-CRITT (Centre d'Application et de Transfromation des AgroRessource) kunye ne Apesa (Association pour l Ummandla kunye ne-Sécurite en Aquitaine) ziyinxalenye ye-cyclalg consortium.
NgoJulayi 18 no-19, intlanganiso yokugqibela yawo onke amaqabane yabanjwa kwikomkhulu leCener eSarrigurren (Navarra), le yayiyintlanganiso yesithathu yokulandela le projekthi.
Kulo mfanekiso ungabona amaqabane eprojekthi ehlala eCener ngezo ntsuku zentlanganiso.
Ngezi ntsuku zimbini, ababekho, kwelinye icala, babelane kwaye ngokudibeneyo bahlalutya iziphumo ezizuziweyo kwelinye icala, bafikelela kwi isivumelwano sezenzo eziyimfuneko ukuqhubela phambili ekwenzeni imisebenzi elandelayo ecwangcisiweyo.
ICyclalg inegalelo kwizisombululo ezitsha zokuqhubela phambili kuphuhliso lweminye imithombo yamandla ahlaziyekayo, yiyo loo nto kuthandwa uzinzo kwezoqoqosho yenkqubo yehlabathi jikelele yokufumana i-biodiesel evela kwi-microalgae kunye ne uzinzo kwindalo esingqongileyo.
Uhlobo olutsha lweCyclalg ke lusekwe kwi indlela kumatshini wokucoca ulwelo ngemicroalgae. Ngokunjalo, ayikhawulelwanga ekusetyenzisweni kwayo njengenkqubo yamandla emveliso, kodwa ifuna Qhubeka uzinzo lwakho.
Ukufezekisa umbulelo wamva ku Ukusetyenziswa kwebiomass ngokusebenzisa ulwelwe ngendlela edibeneyo, ngaloo ndlela ufumana uluhlu olubanzi lwe iimveliso eziphilayo enokuba nexabiso lokurhweba kumacandelo oqoqosho ahlukeneyo omhlaba we-POCTEFA, anje ngala: izithambiso, izichumisi, icandelo lokutya kwezilwanyana, phakathi kwezinye izinto, kunye nomzi mveliso weekhemikhali, ngakumbi izinto zokubambelela kunye neepolols.
Nangona kunjalo, indlela entsha yeCyclalg igcinwe ngokusekwa kwi isetyhula imodeli yoqoqosho ngenkqubo, ngokulandela i ubuninzi bokusebenza kakuhle esele isetyenzisiwe, ihlala inenjongo yokufikelela kwiparadigm yenkunkuma, ngaloo ndlela behlonipha okusingqongileyo nangendlela efanelekileyo.
Le projekthi iza kuphuhliswa iminyaka emi-3 kuhlahlo-lwabiwo mali lwe- 1,4 million, apho i-65% yohlahlo-lwabiwo mali ixhaswe yi-ERDF, oko kukuthi, iNgxowa-mali yoPhuhliso yeNgingqi yaseYurophu, ngokusebenzisa iNkqubo ye-Interreg VA eSpain-France-Andorra Programme (POCTEFA 2014-2020).
Inyaniso yokuba i-biodiesel inokufumaneka kwi-microalgae elinywayo kuthetha inyathelo elikhulu kwimveliso yamandla ongezelelweyo, kule meko i-biomass, ishiya bucala okanye inciphise ngandlela ithile imimandla eshiye ukulima iintlobo ezithile zezityalo ezifana nommoba weswekile oqhelekileyo nokubashiya bezolimo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » IBiomass » I-cyclalg ifumana i-12 kg yokuqala ye-biomass evela kwi-microalgae
ISpain ijongene nokuphela kobomi obuncedo beefama zomoya
Ngaba kunokukhutshwa ukusetyenziswa kwe-biomass energy?